Izikhathi Zokudlala Mahhala Emakhasino E-inthanethi ENingizimu Afrika
Ikhaya / izikhathi zokudlala mahhala emakhasino e-inthanethi eningizimu afrika
Ingabe izikhathi zokudlala mahhala emakhasino zisho imali yamahhala? Nokho, nakuba imidlalo yekhasino ku-inthanethi kufanele okokuqala ibe nakho ukujabulisa, akulimazi uma uzokwazi ukuthola imadlana enqubeni. Ngokucabanga ukuthi ikhasino lihlala libonakala linenhlanhla kunamakhasimende alo, abadlali be-inthanethi badinga ukuthola indlela yokuthuthukisa amathuba abo okuwina futhi kulapho izikhathi zokudlala mahhala zingaba usizo olukhulu khona.
Noma zivame ukukhangiswa njengemali yamahhala, izikhathi zokudlala mahhala kufanele zithathwe njengokheshi webhonasi ongeke ukhishwe ngaphambi kokuhlangabezana nezidingo ezithile zokubheja ukuze ukhiphe imali. Kukhona amanye amabhonasi ezikhathi zokudlala mahhala angakhishwa ngokheshi wangempela kungenamibandela ekhona, futhi lokhu kusobala ukuthi kuhle kubadlali, kodwa kufanele wazi ukuthi amanye adinga ukuthi ubheje imali oyiwine ngezikhathi zokudlala mahhala izikhathi eziningi ngaphambili kokukhipha ukheshi.
Abathandi bekhasino baseNingizimu Afrika banesabelo esilinganayo sezikhungo zokugembula eziku-inthanethi ezinikezela ngezikhathi zokudlala mahhala kubadlali abasha nabakhona, kepha akulula ngaso sonke isikhathi ukuthola iphromoshini elifanela isitayela sakho sokudlala futhi linikeze inani elihle lemali. Kunezici eziningana okudingeka uzicabangele ngesikhathi senqubo yokukhetha amabhonasi amahle kakhulu ezikhathi zokudlala mahhala, ngakho-ke funda ukuze ufunde kabanzi mayelana nalokhu.
Amakhasino Ezikhathi Zokudlala Mahhala Ahamba Phambili ENingizimu Afrika
100% Ize ifike R3,333 Ibhonasi + 100 Izikhathi Zokudlala Mahhala
Ize ifike R22,500 Ibhonasi + 200 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
50 Yemijikelezo Kwi dephozithi Yokuqala
100% Ize ifike R1234 Ibhonasi + 10 Izikhathi Zokudlala Mahhala Ama-No Deposit Bonus
100% Ize ifike R999 + 99 Izikhathi Zokudlala Mahhala
R22,500 Ibhonasi Lokukwamukela + 300 Izikhathi Zokudlala Mahhala
100% Ize ifike 100 Izikhathi Zokudlala Mahhala
100% Ize ifike R2,250 + 150 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
Ize ifike R15,000 Mahhala + 50 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
300% ne 555 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins + 20 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Sesivele sishilo ukuthi izikhathi zokudlala mahhala ziza ngazo zonke izinhlobo nosayizi, futhi kubalulekile ukuthi wazi kahle uhlobo ngalunye ukuze wazi kahle ukuthi uthola ini. Izikhathi zokudlala mahhala ezingadingi idiphozithi nezikhathi zokudlala mahhala ezidinga idiphozithi yizigaba ezimbili eziyinhloko, kepha abadlali bekhasino baseNingizimu Afrika bazophinda bahlangane namabhonasi ezikhathi zokudlala mahhala ezihambisana nemicimbi emikhulu yezemidlalo.
Zisebenza Kanjani Izikhathi Zokudlala Mahhala?
Ngokungafani namabhonasi kakheshi angasetshenziswa emidlalweni eminingi ekhasino, kubandakanya imidlalo yamakhadi namatafula, izikhathi zokudlala mahhala zenzelwe ukubhejwa emidlalweni ethandwayo yemishini yokugembula, futhi asebenza kuphela kanye ukubheja emshinini yokugembula yevidiyo.
Abadlali bangathola noma yikuphi kusuka ku-10 kuya ku-200 wezikhathi zokudlala mahhala, futhi kubalulekile ukuqaphela ukuthi akufani no-R10 noma u-R200, okungukuthi, kulingana nemali, kodwa kulingana nezikhathi zokudlala ezidlalwe ngemali ephansi kakhulu ngenkathi inombolo enkulu yama-payline esebenza, okuvamise ukuba phakathi kuka-R0.10 no-R5.00 ngesikhathi sokudlala ngasinye.
Uma usubheje zonke izikhathi zokudlala mahhala obuziklonyelisiwe, inani eliwiniwe lizothathwa njengemali yebhonasi, ngaphandle kwalapho iphromoshini isho ukuthi noma yikuphi ukuwina kukhokhwa ngekheshi yangempela. Lezo zimali zamabhonasi kuzofanele zibhejwe kaningana ekhasino ngaphambili kokucela ukukhipha imali, okusho ukuthi izikhathi zokudlala mahhala zizoba yimali yangempela uma zonke izimfuneko zokudlala seziqediwe.
Izikhathi zokudlala mahhala ezingadingi idiphozithi
Ngengoba igama lisho, Izikhathi zokudlala mahhala ezingadingi idiphozithi yilezo lapho umdlali eklonyeliswa Izikhathi zokudlala engafakanga imali yakhe engcupheni, futhi kusobala ukuthi ngeke walahla imali ngamaphromoshi anjena. Kunezikhathi ezimbili lapho amakhasino e-inthanethi azokwethula Izikhathi zokudlala mahhala ezingadingi idiphozithi.
Isimo esivame kakhulu ngukubona amawebhusayithi ekhasino azayo efaka phakathi izikhathi zokudlala mahhala njengengxenye yephakeji yawo lokukwamukela, futhi elenzelwe ukuheha amakhasimende amasha ekhasino, okusho ukuthi bayajabula ngokunika abadlali bamakhasino amukela irandi (ZAR) into encane abangayisebenzisa ukuqala ukudlala, besazi ukuthi bangaqhubeka bazuze okuningi kakhulu ngokuzayo.
Ezinye izindawo zemidlalo ezavulwa kudala zizohlala zinikeza izikhathi zokudlala mahhala kubadlali abakade badlala njengendlela yokubonga ukwethembeka kwabo futhi zinethemba lokubagcina bedlala ngokuzayo. Lezi zikhathi zokudlala mahhala zivame ukunikezwa zingenamibandela, okusho ukuthi konke okuwinayo kungokwakho ukugcina.
Izikhathi Zokudlala Mahhala Ezidinga Idiphozithi
Ezikhathini eziningi, noma iyiphi imali yamahhala eza kuwe izoncika enanini lemali lediphozithi langempela, njengoba idiphozithi yamahhala izonikezwa kuphela uma wenze idiphozithi efanelekile. Inombolo yezikhathi zokudlala mahhala ongayithola izokhonjiswa kumigomo nemibandela yephromoshini, kanye neminye imininingwane mayelana naleyo phromoshini.
Ngokuya ngekhasino, izikhathi zokudlala mahhala zingatholakala kuphela kubadlali abasha noma abakhona, kepha kunezindawo lapho wonke amakhasimende afanelekile ukuthola imali yamahhala.
Ingabe Izikhathi Zokudlala Mahhala Zitholakala Kuselula?
Amakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika nawo aqhuba amaphromoshini ezikhathi zokudlala avumela amakhasimende awo ukuthi angagcini nje ngokuthatha amaphromoshini ngedeskithophu noma ngeselula, kodwa futhi asebenzise, izikhathi zokudlala mahhala futhi enze inzuzo enhle esebenzisa amadivayisi abo ethabhulethi kanye neselula ehlakaniphile. Njengoba kwanda ukudlala imidlalo yamakhasino uhamba, amakhasino e-inthanethi ahamba phambili aseqalile ukunaka kakhulu abadlali bamageyimu eselula futhi aqukethe iwebhusayithi yeselula noma ama-app amakhasino eselula zabasebenzisi be-iOS, i-Android ne-Windows.
Ikhasino yeselula ayigcini ngokuvumela amakhasimende avela eNingizimu Afrika ukuthi abhalisele i-akhawunti yemali yangempela, kodwa futhi akwazi ukudiphozitha imali ngerandi laseNingizimu Afrika (i-ZAR), asebenzise wonke amabhonasi namaphromoshini futhi ajabulele imidlalo ayithandayo evela kubakhiqizi besofthiwe abahamba phambili, uma nje benokuxhumeka kwe-inthanethi okuhle..
Ngakho-ke, noma ngabe ukhetha ukufinyelela kumakhasino e-inthanethi ekunethekezeni kwekhaya lakho noma uhamba ngamadivayisi eselula, uzokwazi ukuthatha izikhathi zokudlala mahhala ungenazinkinga. Ngemuva kokusho lokho, kuzofanele futhi ufunde imigomo nemibandela yephromoshini ngokucophelela ngaphambili kokukhetha ukuyithatha, njengoba kungewona wonke amaphromoshini azobe elungile ngokuhamba kwesikhathi.
Uma esetshenziswe kahle, izikhathi zokudlala mahhala zingaba yindlela enhle kakhulu yokukhulisa ibhalansi ye-akhawunti yakho futhi uthuthukise amathuba akho okuwina, kepha, njengoba kuvame ukwenzeka lokho, amanye amaphromoshini azoba ngcono kunamanye, ngakho-ke qinisekisa ukuthi uhlala ukhetha ngolwazi.